Global Voices नेपालीमा » आधुनिक मङ्गाेलियालाई केन्द्रमा राखि अघि बढिरहेका एक युवा फाेटाेग्राफर · Global Voices नेपालीमा » Print
अनुवाद पोष्ट गरिएको 26 सेप्टेम्बर 2020 18:08 GMT 1	 · लेखक Filip Noubel अनुवादक Mahesh Shrestha
श्रेणी : मध्य एशिया र काकेशस, मङ्गोलिया, Gay Rights (LGBT), कला र संस्कृति, नागरिक मिडिया, फोटोग्राफी
खादाकाे पट्टी बाँधिरहेका पुरुषहरू । रेशमी कपडाबाट बनेकाे खादा (तिब्बती भाषामा कटक) लाइ बुद्धधर्मावलम्बीहरूका माझ एक पवित्र वस्तु ठानी विशेष समाराेहहरू जस्तै जन्माेत्सव, मृत्युसभा र विवाहमा आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ । तस्वीरः कुश जाेरिग्ट, (अनुमति लिई प्रयाेग गरिएकाे) ।
मङ्गाेलियाकाे बारेमा कसैले साेचिहालेमा उनीहरूकाे दिमागमा पहिले आउने कुरामा समकालिन वा आधुनिक कला मात्र पर्दैन ।
यद्यपि, हाल आएर याे देशकाे कला परिदृष्य जिवन्त भइसकेकाे छ । मङ्गाेलियन कलाकारहरूले विश्वभरका आधुनिक कला, फेशन, साहित्य तथा दृष्य कलाकारितामा अन्वेषण गर्न थालेका छन् । कहिलेकाँही उनीहरूले आफ्ना परम्परागत कला शैलीमा यिनलाई मिसाउने गरेका छन् । प्राय धेरै समकालिन कलाकारहरू राजधानी उलानबाटरमा बस्ने गर्दछन् । कुल तीस लाख जनसङ्ख्या रहेकाे यस देशकाे आधा जतिकाे घर बनेकाे छ, याे राजधानी शहर ।
उलानबाटर यसका पृथक जिल्लाहरू जहाँ झुन्डमा बनाइएका परम्परागत मङ्गाेलयन युर्ट  पालहरूका कारण परिचित छ । यस क्षेत्रमा खनीज उद्याेगहरूकाे बाहुल्यता छ । तर उलानबाटरकाे द्रुत विकासले निम्त्याएकाे घातक प्रदुषणले नयाँ सामाजिक विभाजनहरू ल्याएकाे छ । र यसैका कारण याे राजधानी कुख्यात बन्दै गईरहेकाे छ । यहाँ भएकाे व्यापारिक फड्काेले सियाेल, टाेक्याे वा बेइजिङ जस्तै अत्याधुनिक शहरी भू–दृष्यकाे विकास गराएकाे छ ।
मङ्गाेलियन फाेटाेग्राफर कुस जाेरिग्टले खिचेका तस्वीरहरूले यहाँकाे शहरी भू–दृष्य, शहरी अनुभव र यहाँ बसाेबास गर्ने मानिसहरूलाई समेट्ने गरेकाे छ ।
याे अन्तर्वाता संक्षिप्तताका लागि सम्पादन गरिएकाे हाे ।
कुस जाेरिग्ट । तस्वीरः ब्ल्गुनी हिराेसी (अनुमति लिई प्रयाेग गरिएकाे) ।
फिलिप नुबेल : तपाई बहुप्रतिभाशाली कलाकार हुनुहुन्छ जाे एक परम्परागत संगीतकार, त्यसपछि ज्याज संगीतकार, गायक अनि एक पत्रकार पनि हुनुभाे र अहिले आएर फाेटाेग्राफर हुनुहुन्छ । तपाईले किन फाेटाेग्राफी छान्नुभयाे?
कुस जाेरिग्ट : म स्वअन्वेषणकाे एक यात्री हुँ । फाेटाेग्राफी, मेराे आफ्नाे निकट भएकाे पाए । शुरूवातका दिनहरूमा म दृष्यहरूसँग साक्षात्कार थिइन । मलाई फिल्म वा फाेटाेग्राफीमा कसैले कर गरेर लगाएकाे हैन । यसका बारेमा संगीतकाे अध्ययन गर्ने बेला केही ज्ञान भने थियाे । मैले ज्याज संगीतकाे नयाँ विधाकाे प्रयाेग गरे तर म एक परम्परागत परिवारमा हुर्किएकाे हुँ । मेरा अभिभावकहरू शास्त्रीय मङ्गाेलियन संगीतका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । मेराे भाइ एक संगीत कम्पाेजर हाे । म आफै पनि वर्षाैदेखि हाम्राे परम्परागत वाद्यवादन माेरिन खुर  बजाउन प्रशिक्षित छु । जब म एक पत्रकारका रूपमा काम गर्न थाले, मैले कला विधामा रिपाेर्टिङ गर्न थाले । मैले फेशन क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिहरूकाे अन्तर्वाता गरेकाे छु । तीन वर्षअघि, एक फाेटाे सम्पादकका रूपमा म अर्काे सञ्चार गृहमा प्रवेश गरे । त्यहाँ फाेटाे निबन्धहरू तयार गर्नुका साथै अन्य फाेटाेग्राफरहरूलाई अनुबन्ध गर्नु मेराे मुख्य काम थियाे । त्यहीबेला मैले दृष्य कलाकाे प्रभावका बारेमा अनुभव गर्ने माैका पाए । त्यसपछि, साढे दुई वर्षअघि मैले एउटा क्यामेरा किने । आफूले आफूलाई नै प्रशिक्षित गरे र गएकाे वर्षबाट मैले तस्वीरमार्फत कथा भन्न थाले ।
फिलिप नुबेल : तपाईकाे हाल उलानबाटरकाे रेड गेर क्रियटिभ स्पेसमा प्रदर्शनरत प्रदर्शनी , हिँउद र शहरी प्रदुषण विषयवस्तुमा केन्द्रित छ । शहरसँग तपाईकाे सम्बन्धका बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ?
कुस जाेरिग्ट : म याे फाेटाे निबन्धमा पाँचवटा खण्डहरूमार्फत तीनवटा विषयहरूमा केन्द्रित हुन चाहेकाे थिए, जुन समकालिन जर्मन–ब्रिटिस संगीतकार, कम्पाेजर म्याक्स रिचर बाट प्रभावित थियाे । पहिलाे विषय हाे, सुन्दरताः म वर्षभरि नै यस शहरबाट सुन्दरता खाेज्न चाहन्छु । छाेटाे गर्मीयाममा बाहेक, उलानबाटरमा प्राय छिट्टै अन्धकार हुने गर्दछ । छ महिनासम्म रहने लामाे र ठन्डी हिँउदका यी तस्वीरहरूमा केही न केही त पक्कै छ । हिँउद राेमाञ्चक हुन्छ किनकि यसबेला हावा बाक्लाे हुने गर्दछ र एकदमै जाडाे हुन्छ, याे बेला लगभग माइनस ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रम समेत हुने गर्दछ । मैले केही तस्वीरहरूमा प्रकाश र ठन्डी निलाेकाे मिश्रण देखाउन खाेजेकाे छुँ । म मानिसहरूले यसकाे महसुस गरून् भन्ने चाहन्छु ।
अर्काे विषय हाे, प्रदुषण र गन्जागाेल । यस शहरमा हुने प्रदुषण गेर जिल्लाबाट [यहाँका मानिसहरू जाँडाेबाट बच्नका लागि आफू बस्ने पालहरूमा काेइला बाल्ने गर्दछन्– सं.] आउँदछ र यहाँ गुड्ने कैयन् कारहरूले यसलाई बढावा दिईरहेकाे छ । गएकाे वर्ष प्रदुषणकाे अवस्था केही सुधाराेन्मुख थियाे तर शहर भने अझै पनि चरम प्रदुषणयुक्त नै छ । जसलाई हामीले नियमित भाेग्दै र देख्दै आएका छाैं र हाल आएर याे सामान्य झै भैसकेकाे छ । त्याे अवस्थालाई हामीले कसाे कसाे गरी देख्न पाएका थिएनाैं, त्यही भएर पनि त्यसलाई पनि म आफ्नाे तस्विरहरू मार्फत् देखाउन चाहन्थे । मैले यस प्रदर्शनीमा साेचबिचार गरी गेर जिल्लालाई समेटेकाे छैन किनकि यस ठाउँकाे आफ्नै कथा  छ र यसकाे बारेमा म भिन्न कथा भन्न चाहन्छु । जति जति समय बित्दै जान्छ त्यति त्यति याे शहर मेराे लागि घनिष्ठ बन्दै जान्छ ।
थप अध्ययनका लागि: For LGBTQ+ people in Mongolia, stigma isafact of life 
याे तस्विरमा देखिएकी उलानबाटरकी महिलाले यहाँकाे चरम प्रदुषणबाट बच्न मास्क लगाएकी हुन् नकी काेभिड–१९ बाट बच्न । तस्वीरः कुश जाेरिग्ट, (अनुमति लिई प्रयाेग गरिएकाे) ।
फिलिप नुबेल : तपाईकाे महत्वपूर्ण फाेटाेहरूमा र तपाईकाे इन्स्टाग्राममा समेत नभएकाे, शरिर र लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी फाेटाेहरू पनि हाे । तपाईकाे यस कामकाे बारेमा हामीलाई बताउनुस् न र यसलाई मङ्गाेलियामा कसरी लिइयाे?
कुस जाेरिग्ट : मलाई क्वयेर अर्थात् समलैङ्गिकतालाई शब्दहरूमा बताउनु भन्दा तस्वीरहरूमार्फत बुझाउन सजिलाे लाग्छ । यसकाे बारेमा बताउन वा बुझाउनका लागि मलाई याे माध्यम नै प्राकृतिक लाग्छ । म पक्कै पनि पुरुष शरिरहरूलाई देखाउन ईच्छुक छुँ । मेराे गर्मीयाम अर्थात् ग्रिष्म फाेटाे निबन्धमा क्वयेरसम्बन्धी भाव झल्काउने प्रयास गरेकाे छुँ । जहाँ, पाँच जवान, नाजुक, शुद्ध र बैंसालु युवाहरू, जाे दृष्टिविहीन समेत छन् [उनीहरूकाे आँखामा पट्टी बाँधिएकाे छ– सं.] र लुकेका छन् ।
उनीहरूलाई थाहा छैन की उनीहरू बैंसालु भईसकेका छन् । लुकाउने र देखाउने नै मेराे व्यक्तिगत कथाकाे आधार हाे ।
म फिटनेस प्रशिक्षक समेत हुँ । म यस्ताे खाले शरिर भएकाे हेर्न चाहन्छु । १० वर्षसम्म यसैमा प्रशिक्षित भए र त्यसपछि व्यक्तिगत प्रशिक्षक बन्नका लागि समेत अध्ययन गरे । यस विधामा व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक पद्धतिहरू अवलम्बन गर्ने मेराे इच्छा छ । तर पुरुषहरूका मात्र फाेटाे देख्दा मानिसहरू शुरूमा हच्किएकाे पाए । त्यसैले पनि पछि मैले अलि स्वस्थकर रूपमा स्वास्थ्य र तन्दुरूस्तिसम्बन्धी फाेटाेहरू समेट्न थाले । म एक फिटनेस प्रशिक्षकका रूपमा आफूलाई र आफ्ना फाेटाेहरूकाे प्रवर्द्धन गर्न तल्लिन छु ।
फिलिप नुबेल : बाहिरका मानिसहरूले साधारण अवधारणा राख्दा मङ्गाेलिया दुई विशाल देशहरू, रसिया र चीनकाे बिचमा अवस्थित एक अलग देश हाे भन्ने छ । स्थानले समकालिन कला, चाहे त्याे दृष्य हाेस्, अभिनय वा अरू कुनै विधा किन नहाेस्, लाई कसरी प्रभाव पार्दछ?
कुस जाेरिग्ट : बिसाैं शताब्दिकाे प्रारम्भसम्म पनि हामीले चीनसँग हाम्र संस्कृती, संगीत, वास्तुकला र इतिहास समेत बाड्यौं। सन् १९२१ मा स्वतन्त्र भएपछि र १९९० मा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति आएपछि हामी स्पष्ट विचारधारा भएकाे एक शक्तिशाली साेभियत–शैली शासनअन्तर्गत अघि बढ्याैं । यसले हाम्राेमा पश्चिमी शास्त्रिय संगीतकाे विकास हुनमा भूमिका समेत खेल्याे । यी दुई छिमेक राष्ट्रहरूले पक्कै पनि हामीलाई साँस्कृतिक रूपमा प्रभाव पारे । हामी प्रजातान्त्रिक रूपमा स्वतन्त्र भएकाे ३० वर्ष भईसक्याे तर हामी आज पनि हाम्राे साँस्कृतिक पहिचानलाई परिभाषित गर्न प्रयासरत छाैं । आज हाम्राे ज्याज संगीतले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न भ्याएको छ । तर शहरी वा आधुनिक कलाका रूपमा फाेटाेग्राफी एक नयाँ विधा हाे । धेरैजसाे व्यावसायिक फाेटाेग्राफरहरू भू–दृष्य, विवाह वा फेशन फाेटाेग्राफी विधामा आवद्ध छन् । अहिले यहाँ फाेटाेग्राफी विधामा नयाँ तरङ्ग सृजना भएकाे छ । धन्यवाद छ इन्स्टाग्रामलाई, यदि तपाईले #instameetulaanbaatar वा #ubeveryday ह्यासट्गाय खाेजी गर्नुभयाे भने तपाईले प्रशस्त फाेटाेहरू देख्न सक्नुहुन्छ । यसैले पनि म कलात्मक फाेटाेग्राफीमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । गत वर्ष मैले एउटा लघु चलचित्र मा काम गरे । जसमा मैले शहरी कथामा केन्द्रित भई, विश्वका नागरिकहरूसम्म मङ्गाेलियाकाे काम देखाउने प्रयास गरेकाे छु ।
कुस जाेरिग्टलाई इन्स्टाग्राममा समेत फलाे गर्न सक्नुहुन्छ । 
URL to article: https://ne.globalvoices.org/2020/09/26/3041/
 मिसाउने : https://www.youtube.com/watch?v=zi1Vycdta6Q
 मङ्गाेलयन युर्ट: https://en.wikipedia.org/wiki/Yurt
 प्रदर्शनरत प्रदर्शनी: http://ub.life/p/ulaanbaatariig-sonsokhui-khiigeed-uzekhuin-rikhteriin-temdeglel?fbclid=IwAR1rc-_2svDD8PCCiFCgrxOLn_EzXuhyvcrhh9-CJ-TwPdS-JbCFTBNwq8c
 कुस जाेरिग्टलाई इन्स्टाग्राममा समेत फलाे गर्न सक्नुहुन्छ ।: https://www.instagram.com/kush.zorigt/